Imikhonyovu Yelotho | Ukukhwabanisa kweLottery | Ungawukhomba Kanjani Umkhonyovu We-Lottery
Ikhaya / Imihlahlandlela / ukukhwabanisa kwe-lottery
Ungazivikela Kanjani Kubakhohlisi Be-Lottery
Ama-lotto aku-inthanethi ayanda ekuthandeni futhi ashesha ukuba yimboni yezigidi eziningi emhlabeni wonke. Uhlangothi olumnyama ngeshwa lwalokhu kuduma okwandayo ukukhuphuka kwemikhonyovu ye-lottery. Laba bakhohlisi bakhohlise abantu abaningi abangenacala ngemali yabo abayisebenzele kanzima. Kunezinombolo ezinkulu zemikhonyovu ye-lottery ye-imeyili, iningi lazo iziphathimandla ezingakwazi ukuphenya ngenxa yezinkinga zokuhamba. Abasebenzisi be-inthanethi ngakho-ke kufanele baqaphele kakhulu futhi bangabi yizisulu zemikhonyovu enjalo.
Izinhlobo Zemikhonyovu Ye-Lottery Okufanele Uyibheke
Uhlobo oludume kakhulu lomkhonyovu we-lottery uhlobo elingu-‘419 ‘ lokukhwabanisa kwemali ekhokhwa ngaphambi kwesikhathi. Ungathola i-imeyili ethi uzuze umklomelo wemali yelotho ongakaze ungene. Imvamisa kunesidingo semali ekhokhwayo (imali ekhokhwayo yekhuriya, intela, intela yamasiko, ukuthunyelwa, njll) okudingeka ikhokhwe ngaphambi kokuthi ama-winnies atholakale.
Lesi sicelo semali sivame ukudala ukucasulwa ngoke mizwa okuzokwenza ukuthi uthumele imininingwane yakho yasebhange, ikheli, ikhadi lesikweletu noma imininingwane yakho. Ngaphezu kokukudlela imali, la ma-imeyili angaqukatha amagciwane noma isoftware engadingeki engalimaza ikhompyutha yakho.
Ungawukhomba kanjani umkhonyovu we-Lottery.
Ku-imeyili uzocelwa imininingwane yakho efana ne-akhawunti yasebhange, inombolo yekhadi lesikweletu, inombolo yepasipoti, izinombolo zezincwadi zokushayela noma eminye imininingwane enjalo. Ku-imeyili uzothenjiswa umklomelo ocabanga ukuthi uwine kwilotto. (Ayikho ilotho yomthetho eyazisa abawinile nge-imeyili kuphela). Imvamisa ulimi olusetshenzisiwe luphansi kakhulu (isipelingi esibi nohlelo lolimi) futhi akunikezwa imininingwane ethile ngemithetho noma ukuthi isebenza kanjani.
Abakhohlisi bathembisa ukuthumela umklomelo kuwe ngemuva kwemali yokukhokha noma uhlobo oluthile lokukhokha selukhokhelwe kubo. Lokhu akukaze kucelwe ngamalotho asemthethweni aku-inthanethi.
Ukuvimbela ukukhwabanisa kweLottery
Ukukhwabanisa kweLottery kungavinjelwa kalula ngezindlela eziningi.
1. Ungachofozi ama-link aku-imeyili uma usola umyalezo.
2. Ungaphenduli kuma-imeyili athunyelwa ngabantu abangaziwa kuwe.
3. Bika noma yimiphi imilayezo enjalo ku-ISP yakho.
4. Ungalokothi udalule ulwazi lomuntu siqu noma lwezezimali mayelana nama-akhawunti asebhange, imininingwane yekhadi lesikweletu, nekheli kunoma yimuphi umthumeli we-imeyili ongaziwa ngoba kungaholela eku thatheni imininingwane yakho.
5. Faka u-spam ku bhokisi le-imeyili yakho.
6. Ungalokothi ukhokhe noma yisiphi isamba semali ukuze uthole umklomelo wakho.
7. Ungagcwalisi noma yimaphi amafomu ezicelo eziku-inthanethi.
Ukukhwabanisa kweLottery kungavinjelwa ngokulandela imihlahlandlela enikezwe ngenhla nangokuhlanganyela kuphela ngemikhiqizo esunguliwe nethembekile eku-inthanethi.